Wararka - Maxaad ugu dooratay astaamaha aluminium ee warshadaha dayrarka caadiga ah?
Iyadoo la horumarinayo The Times, shirkado badan oo soo saarayaasha qalabka warshadaha ah ayaa jecel inay qalabkooda iyo aaladohooda ku hubeeyaan xayndaabka, iyagoo ciyaaraya go'doomin nabadgelyo si loo ilaaliyo howlaha caadiga ah ee mashiinnada iyo amniga shaqaalaha. Sidee ku saabsan aluminium warshadaha loogu talagalay xayndaabka gaarka ah? Waa inuu fiicnaadaa! Oo aad u wanaagsan! Sababtoo ah astaanta aluminium ee warshaddu waxay leedahay dareen casri ah, sidoo kale si gaar ah ayey u fududahay uguna habboon tahay in la isticmaalo, iyo alaabada taageertaa way fududahay in la isu geeyo. Intaa waxaa dheer, astaanta aluminium lafteeda waxay leedahay shaqeynta ka-hortagga-daxalka iyo anti-miridhku si fudud loo nadiifiyo. Hoos waxaan ku soo bandhigi doonnaa xayndaabka aluminiumka, aan fahamno guud ahaan qalabka la xiriira xayndaabka aluminium iyo hababka wax soo saarka, iyo wixii la mid ah.
Qaybta ugu weyn ee xayndaabka aluminium ee warshadaha ayaa badanaa ah 4040 iyo 4080. Badanaa koonaha tiirarka, sare, culeyska culeyska ayaa ah meel adag oo lagu isticmaalo astaanta 4080. Astaamaha khadka caadiga ah waa laba jibbaaran, badeecooyinka dhammaaday waa kuwo oksaydh ah, oogada oo siman Gaar ahaan kadib warshadaha 4.0, aqoon isweydaarsiyo warshado badan ayaa ubaahan xayndaab muuqaal aluminium ah si loo hubiyo badbaadada aqoon isweydaarsiyada.
Isticmaalka aluminium warshad farsamaynta farsamaynta xayndaabka, isku imaatinku waa mid aad u habboon, qaybta isku xirka waa isku xirnaanta qalabka isku xirnaanta. Waxaan ubaahanahay oo kaliya inaan ka shaqeyno sida ku cad sawirada horey loo qorsheeyay, godadka feerka iyo fiilooyinka tuubada, oo si gaar ah ugu habboon isku imaatinka. Qeybta hoose ee xayndaabku sidoo kale waa cag gaar ah, oo la hagaajin karo ama la dhaqaajin karo. Gaar ahaan way fududahay in lagu daro qalab gaar ah.
Intaa waxaa dheer, xayndaabka alaabada aluminium ee la xulay ee alaabta kaabayaasha ah, badanaa acrylic, nalka ilaalinta, holaca ololka, plexiglass iyo wixii la mid ah. Macaamiisha kale waxay dooran doonaan 40 ilaa 40 shabakad madow. Markaad isticmaaleyso qalabkan kaabayaasha ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad geliso booska loogu talagalay astaanta, taas oo aad ugu habboon isku xirnaanta bilaa cillad-darrada ah.